Wasiir kale Oo Maanta Is-casilay, Kuna Eedeeyay Dawlada Dhexe Faragalinta Dorashada Galmudug. – Heemaal News Network
Wasiirka ayaa shir uu shalay ku qabtay Dhuusamareeb ku sheegay in xubno ka mid ah dowladda dhexe ee Soomaaliya ay Handaad ku heyso xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug ee dhawaan lasoo dhisay.
Waxaa uu sheegay in lagu amray in aysan la kulmi karin Musharaxiinta u taagan xilka Madaxtinimadda Galmudug, islamarkaana liiska laga saari doono Shaqsigii Salaama Musharaxiinta aan ka aheyn midka dowladda.
Xukuumadda Soomaaliya ee uu ka tirsan ayuu sheegay in ay dhibaato badan ku heyso degaanada Galmudug, islamarkaana hadii aan wax laga qaban dhibaatooyin badan ay ka dhalan doonaan.
Wasiir Wehliye ayaa ka mid ahaa xubnihii sidda weyn uga qeyb qaatay dib u heshisiintii Ahlusunna iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Madaxweyne Biixi Oo la Kulmey Safiirka Britain Ee Somaliya.(Sawiro)